Miaraka Amin ‘Atoa Sy Ramatoakely “People” Ao Hong Kong, Fantaro Iza no Iza Ao Anatin’ny Revolisionan’ny Elo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2014 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, Português, Italiano, English
Mankany amin'ny teny Anglisy ny rohy rehetra raha tsy misy fanamarihana manokana
Manao hetsi-panoherana mba hahafahana mifidy amin'ny fomba demaokratika izay ho lehiben'ny mpanatanteraka sy ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra mpanao lalàna ireo olom-pirenena tsotra ao Hong Kong. Mitondra elo eny rehetra eny izy ireo hiarovany tena amin'ny tsifotra dipoavatra, entona mandatsa-dranomaso sy vely kibay ataon'ny polisy. Ankehitriny, lasa endrika maneho ny hetsi-panoherana ampilaminana hitakiana demaokrasia ao Hong Kong ny elo.
Maro amin'ireo sary avy amin'ilay Revolisionan'ny Elo ao Hong Kong no nandrakitra zavatra midadasika, toy ireo mpanao hetsi-panoherana tsy hita endrika mijoro tsy miahotra eo amin'ilay foibe ara-bolan'ny tanàna mba hitaky fifidianana malalaka sy tsy mitanila avy amin'ireo governemanta ao an-toerana sy any Beijing. Saingy difotra ao anatin'io andiam-bahoaka maro io ireo mpitarika sy mpanapa-kevitra mitarika izao fifanenjanana ara-politika izao.
Nandany alina iray manontolo i Maxwell, mpanao sary hanaovana dokambarotra ao Hong Kong, namoronany sariitatra nomeny anarana hoe “Mr and Little Miss Hong Kong People” (Atoa Sy Ramatoakely “People” Ao Hong Kong) mba hanazavany hoe iza ireo olona ao ambadiky ny Revolisiônan'ny Elo.
Aingam-panahy avy amin'ilay sariitatra Anglisy “Mr Men and Little Miss,” ity amin'ny endriny natao ao Hong Kong ity dia natao hanampiana ireo ray aman-dreny hiteny ny zanany momba ireo hetsi-panoherana ka hampahafantatra azy ireo izay zava-miseho eny anivon'ny fiarahamonina. Ninoan'i Maxwell fa na inona na inona zavatra ateraky ny hetsi-panoherana ataon'ny mpomba ny demaokrasia, hahita tombony amin'izany ireo andian-taranaka ho avy.
Topazo maso àry ireto sariitatra anehoana an-dry ” Atoa Sy Ramatoakely “People” Ao Hong Kong ireto :
Atoa Noana, endrika nalaina avy amin'ny tantaran'i Mok Siu Man, mpanao hetsi-panoherana izay nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina ny 2 Oktobra ary niaritra nandritry ny 18 andro mahery. Nanao hetsika niaraka taminà takelaka iray izy, nilaza hoe, “Ho an'ny tombontsoan'ny taranakay, tsy ahoako ny ho faty.”
Ireto kosa maneho an'i Alex Chow sy Lester Shum, mpianatra roa avy amin'ny Fikambanamben'ny Mpianatra Ao Hong Kong, iray amin'ireo fikambanana tena herin'ilay fitorevahana faobe nataon'ny mpomba ny demaokrasia.
Sary maneho an'i Joshua Wong, tanora mpitarika ny hetsika avy amin'ny Scholarism, vondron'ny mpianatra mpikatroka mafàna fo eny amin'ny lisea. Voasambotra izy ny 26 Septambra noho ny nidirany tao amin'ny kianjam-bahoaka teo anoloan'ny foiben'ny governemanta. Ny andro taorian'io dia niteraka fisamborana mpianatra mpikatroka mafàna fo niisa 75 ireo fifandonana mahery setra teo amin'ny mpianatra nanao hetsi-panoherana sy ny polisy ary dia kiririoka nanombohan'ny “Occupy Central” io.
Ity sary ity indray maneho an'i Regina Ip, mpikambana iray ao amin'ny Filankevitra Mpanatanteraky ny governemanta, mpanao lalàna ary lehibe fahiny tao amin'ny birao misahana ny fiarovana tao amin'ny governemanta. Manohana tanteraka ny famoretana feno herisetra ataon'ny polisy amin'ireo mpanao hetsi-panoherana izy.
Ity dia manondro an'i Steve Hui, ilay mpitondra tenin'ny departemantan'ny polisy. Niseho fahitalavitra saika efa ho isanandro izy isaky ny amin'ny 4 ora folakandro mba hitatitra ny fiantraikan'ny hetsi-panoherana amin'ny filaminam-bahoaka hatramin'ny 28 Septambra. Amin'ny maha-lehiben'ny rantsana fifandraisana amin'ny ety ivelany azy, miezaka ny hamerina endrika tsaran'ireo polisy manoloana ny vahoaka i Hui. Kanefa, lahatsary iray niparitaka be nampiseho ny fomba fanamparam-pahefana ataon'ny polisy no nampihen-danja ny zavatra nambarany.
Sary mampiseho an'i Andy Tsang, lehiben'ny polisin'i Hong Kong. Izy no tomponandraikitra tamin'ny fandefasana entona mandatsa-dranomaso tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana tamin'ny 28 Septambra. Nisitritsitrika i Andy Tsang nandritry ny roatokom-bolana taorian'ilay famoretana tamin-kerisetra.
Sary mampiseho an'i Yuen Chi Wai, lehibe vaovao ao amin'ny departemantam-baovaon'ny fahitalavitra (TVB), fantsom-pahitalavitra TV malaza indrindra ao Hong Kong. Nomen'i Yuen baiko ireo ekipa vaovao mba hamoaka ny “script” momba ny feo-lafika iray amin'ny lahatsarim-baovao izay nampiseho mazava tsara manamboninahitra maromaro ao amin'ny polisy nidaroka mpanao hetsi-panoherana iray efa voafatotra rojo vy ny tànany, teo amin'ny zoro iray maizimaizina tsy lavitry ny toerana nanaovany hetsika. Araka ny rakipeo nitete avy amin'ny fivoriana anatiny nataon'ny departemantan'ny fampahalalam-baovaon'ilay fahitalavitra, nokianin'i Yuen ireo mpiara-miasa aminy noho ny ffanehoankeviny nitanila tao anatin'ilay feo-lafika sy niteny hoe, “Tsy ianareo no kankana miaina any anatin'ireo manamboninahitry ny polisy, ahoana no ahazoanareo antoka fa tena nisy tokoa ny famelezana totohondry sy daka?”
Sary maneho an'i Lau Kong Wah, filoha lefitra fahiny tao amin'ny antoko Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) mpomba an'i Beijing (ho fanatsaràna sy fampandrosoana an'i HK). Taorian'ny naha-very seza azy tao amin'ny Filankevitra Mpanao Lalàna, tamin'ny fifidianana 2012, notendren'ny lehiben'ny mpanatanteraka izy ho sekretera lefitry ny Biraon'ny Raharaha ara-lalampanorenana sy ny Lafintany. Izy no tomponandraikitra amin'ny fandrindràna ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo mpitarika ny mpianatra sy Carrie Lam, sekreteran'ny governemanta, hamahàna ny olana momba ny fanavaozana ny fifidianana.
Sary mampiseho an'i Chung Shu Kun, DAB iray mpikambana ao amin'ny filankevitra mpanao lalàna. Voakinan'ireo mpisera ety anaty aterineto izy noho ireo fanehoankeviny tao amin'ny Filankevitra mpanao lalàna. Vao haingana, mba hanamarinany ny tsy maintsy ampiasàn'ny polisy herisetra, nandefa sarinà “elo vy” tao amin'ny Facebook-ny izy ary nilaza fa nasian'ireo mpanao hetsi-panoherana zava-maranitra (hareza) tany anatin'ireo elo, mba hamelezana ny polisy. Taty aoriana, nisy orinasa iray mpisahana ny fanomezana endrika (design) namoaka fanambaràna naneho ny alahelony ka niampanga an'i Chung ho nampiasa tsy araka ny tokony ho izy ny asan-dry zareo — ilay “elo vy” dia taokanto napetraka ho fampiroboroboana ny famerenana mampiasa ny zavatra taloha.
Carrie Lam, ny sekreteran'ny governemantan'i Hong Kong. Mino ny olona fa izy no endriky ny feo malefadefaka ao anatin'ny governemanta satria ezahany ny hamaha ny fifandirana amin'ny alalan'ny fifampiresahana misokatra amin'ireo mpianatra.
Sary maneho ny lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong, C.Y. Leung, izay voahosotry ny media ao an-toerana ho toy ny amboadia hatramin'ny nanapahany hevitra tamin'ny 2012 fa hirotsaka hofidiana ho lehiben'ny mpantanteraka. Taty aoriana, nantsoin'ny olona hoe 689 izy satria izy irery no nahavita nahazo vato 689 amin'ny 1.200 tao amin'ny kaomisionan'ny fifidianana, niaraka tamin'ny fanohanan'ny governemanta ao Beijing. Nolavin'ireo mpanao hetsi-panoherana ny hifampiresaka tamin'i Leung satria ninoan-dry zareo fa te-hampiditra ny fandraisan'anjara mivantan'i Beijing amin'ny raharaha ao Hong Kong izy amin'ny alàlan'ny familiviliana ny Revolisiônan'ny Elo ho toy ny hetsiky ny mpampisara-bazana sy tsikombakomban'ireo hery vahiny mikendry ny hanohintohina ny fahefan'ny governemanta Shinoa.
Mitohy mivoaka ihany ireo sary momba ny Revolisiônan'ny Elo ao amin'ny pejy Facebook Mr. and Little Miss Hong Kong People an'i Maxwell.
Araho ny fandrakofana lalindalina ataonay: Revolisiônan'ny Elo ao Hong Kong